FAQs - Ningbo Ruifeng caaga Co., Ltd
Sidee baan ku heli karaa tijaabada ah waxay xaqiijinayaan tayada?
About lacag muunad iyo lacagta xamuulka muunad
3.Hadii aad meel amarka, waxaan kuu soo celin doonaa lacag xamuulka tijaabada.
3 sano damaanad tayo leh lagu daydo oo dhan.
Maxaad midabka dhabta ah ma aha kuwo la mid ah sida show sawirka?
Waa maxay muddada lacagta?
100% ama 30% qiimaha guud ee in la bixiyo ka hor inta uusan soo saara, aqbali T / T, L / C, Paypal, Western Union iyo wixii la mid ah.
1. pricevwith fiican oo tayo sare leh;
2.qualities yihiin xasiloonida aad u badan;
3.Ordinery iyo dhar fashional halkan bixiyo, iyadoo aan loo eegayn waxa loo gadaaman, daabacay, adag kala midab ah, addoonsi, biyuhu, duudduub ama brozen. Waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad rabto, haddii aynaan haysan, waxaan isku dayi doonaa fiican si aan u raadin kuu ah,
control 4.strict ku saabsan bixinta iyo adeegga wanaagsan ka dib iibka waa furayaasha isku hallaynayay tan iyo macaamiisheena adduunka oo dhan.
Warshadda maqaar dardaro More 10 sano 500 + naqshado.
Ku haboon Sofa, dahaarka, bac, madaxtooyada, baabuur, kabaha, dharka, iwm
Waa maxay shuruudaha gudbinta?
Waa maxay shuruudaha ganacsiga iyo shuruudaha lacag bixinta?